Ndị na-emepụta China KLT-LB6180E-K na ndị na-ebubata ya |Na-egbuke egbuke
Ịkwado onwe na ibutu/Led na metal halide
Ịrụ ọrụ dị elu na mmegharị ahụ nke ụlọ elu ọkụ mkpanaka mmanụ ụgbọala kwadoro
Zitere anyị email Budata akwụkwọ ntuziaka Budata ụdị
▶ Nnukwu ngagharị na ike
Emebere usoro LB6180E maka ụlọ ọrụ ike na-eji ọnụ ọgụgụ buru ibu nke nrụzi gwongworo pickup, nwere ike ịbụ ozugbo ọkọlọtọ nrụzi gwongworo gwongworo dị ka ụgbọ ala, ngwa ngwa na gwongworo pickup nwere ike ịnya ụgbọ ala na saịtị ndozi kacha.
Tụnyere ụlọ ọkụ ọdịnala nke chọrọ nnukwu gwongworo maka nbudata, ọ nwere njirimara nke ịmegharị ihe, mgbanwe, ike na-agafe agafe, ihe dị ala chọrọ maka ọnọdụ okporo ụzọ na irube isi na ụkpụrụ okporo ụzọ, wdg. Ọ nwere ike soro ndị ọrụ nnapụta iji ruo ebe a họpụtara na ngwa ngwa ngwa ngwa. ọsọ na nnapụta mberede.
▶ Ịkwado onwe na ibutu
Usoro LB6180E nwere ikike nke "fulcrum" nke na-ebunye ọkụ eletrik na ntinye usoro nke nwere ike ibunye ma ọ bụ budata na 180 sekọnd. Nwere ike belata nkwadebe ọpụpụ na oge mbufe, na-enweghị nkwado akụrụngwa ndị ọzọ na-ebuli elu ma na-agbaso, ngwa ngwa, dị irè, nchekwa, akụ na ụba.
Ịbunye ọkụ ọkụ ọdịnala na-achọ nnukwu kreenu ma ọ bụ forklift iji wuchaa nbudata, na kreenu ma ọ bụ forklift ga-eso gwongworo ahụ gaa ebe ihe mberede mere tupu ebutu ya.Oge ntinye dị ogologo, ọ na-erikwa ọtụtụ ndị ọrụ, ihe onwunwe na ego ego. Ọrụ ngwa ngwa na-ebufe ngwa ngwa nke usoro njikwa "Fulcrum".
▶ Isi ọkụ - Patented “EBL” sistemu ngwakọta ọkụ pụrụ iche
Isi ihe ọkụ "EBL" na-agụnye oriọna halide metal 1000W na oriọna sodium dị elu nke 1000W. Usoro abụọ nke 350W LED floodlights. Usoro 'EBL' na-amịkọrọ ma na-ezo aka ahụmahụ ọkụ nke ọtụtụ isi ihe mberede, ma e mere ya karịsịa maka mberede mberede. .Ọ na-atụle nke ọma na ọnọdụ ọrụ mberede pụrụ iche iji hụ na mmetụta kachasị mma nke ndị ọrụ na saịtị.
Na elu agba nsụgharị index, mmadụ anya na video usoro nwere ike n'ụzọ ziri ezi weghara mbụ agba nke foto ihe na-enweghị agba iche.The elu nsogbu sodium oriọna nwere elu nchapụta na ike penetrating ike mmiri ozuzo na foogu.Ọ nwere ike hụ na anya irradiation zuru oke n'okpuru ọnọdụ ihu igwe siri ike nke saịtị mberede. Ìhè amụma LED nwere ogologo ndụ, na isi iyi ahụ nwere ndụ ọrụ ruo awa 100,000.A gaghị agbanwe isi iyi ọkụ n'ime usoro ndụ ya. Ike mgbochi siri ike, ìhè ọkụ agaghị agbaji ma ọ bụ mebie ọbụna mgbe ogologo njem na njem na njem na-adịghị mma n'okporo ụzọ, nke na-eme ka a na-eji ọkụ ọkụ na-emekarị. nwere ike ịmalite ozugbo mgbe ụlọ ọkụ chọrọ ịmalite ọzọ ngwa ngwa na ihe mberede na-echeghị.
Nhazi ọkụ inyeaka njirimara.
N'akụkụ abụọ nke ọkụ ọkụ ahụ na-eji ihe ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ na-arụ ọrụ na gburugburu ụlọ ọkụ.A gaghị enwe "oji n'okpuru ìhè" n'iji ụlọ ọkụ ọdịnala eme ihe, nke na-egosipụta n'ụzọ zuru ezu ọrụ ọkụ ọkụ zuru ụwa ọnụ nke ụlọ ọkụ.
▶ Ìhè ọchụchọ
Enyemaka ọkụ 500W ọkụ ọkụ ọkụ dị elu, ịdị irè irradiation anya 400-500m, na iji isi ọkụ iji nweta ma nso ma dị anya iji gboo ihe dị iche iche ọkụ ọkụ na saịtị mberede, dị ka eriri nnyefe / ụlọ elu na-arụ ọrụ okporo ụzọ ụgbọ oloko / okporo ụzọ, ọchụchọ na nnapụta ahịrị, nnapụta saịtị nnapụta, wdg.
▶ Nkọwapụta nkenke
Nkọwa nkenke LB6180E LB6180E-K LB6180E-nchọta
Isi Iyi Ìhè Ngwakọta Ngwakọta Ngwakọta
Chọọ Ìhè —— —— ——
Isi ìhè 2700W 2700W 2700W
Ìhè inyeaka 2*60W (LED) 2*60W (LED) 2*60W (LED)
Generator Narị Narị Narị
Enyere ike 5KW 5KW 5KW
Ogo voltaji 220V 220V 220V
IP ọkwa Ọkụ IP65 Ọkụ IP65 Ọkụ IP65
Akụkụ 1350*1500*1850 1350*1500*1850 1350*1500*1850
Batrị Batrị maka ngwa a kapịrị ọnụ
(DC12V/120AH) Batrị maka ngwa a kapịrị ọnụ
Ogologo ikuku irradiation
(Search Light) —— —— ——
Mpaghara irradiation dị irè
(Ìhè mmiri) 16000 16000 16000
Na-ebuli elu 7m 7m 7m
Oge ịgba ọsọ 25h 25h 25h
Ike tank mmanụ 50l 50l 50l
Mmanụ ụgbọala Mmanụ ụgbọala #92 Mmanụ ụgbọala #92 Mmanụ ụgbọala #92
Malite Eletriki/Akwụkwọ ntuziaka Eletriki/Akwụkwọ ntuziaka Eletriki/Akwụkwọ ntuziaka
Mast ebuli Pneumatic Pneumatic Pneumatic
Ntughari oriọna 90° 90° 90°
Mgbatị Nkwado Eletriki+ Akwụkwọ ntuziaka Eletriki+ Akwụkwọ ntuziaka Eletriki+ Akwụkwọ ntuziaka
Njikwa ndọtị Mmekọrịta/Asynchronous Mmekọrịta/Asynchronous Mmekọrịta/Asynchronous
Mkpokọta ibu <550kg <560kg <565kg
Nke gara aga: KLT- Ngwakọ
Ụlọ elu ọkụ ọkụ anyanwụ
Anyanwụ Power Tower Light